Dalladda PUNSAA oo Baaq u Dirtay Dowladda Puntland, Warsaxaafadeedna ka soo Saartay Xaaladda Puntland | SAHAN ONLINE
Dalladda PUNSAA oo Baaq u Dirtay Dowladda Puntland, Warsaxaafadeedna ka soo Saartay Xaaladda Puntland
Dalladda Daneeyayaasha aan Dowliga ahayn ee PUNSAA ayaa Warsaxafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ka soo horjeedo in la weeraro xarumaha dowladda iyo rabashada ka dhaca guud ahaan Puntland, waxayna ugu baaqday dowladda Puntland in ay si deg deg ah wax uga qabato Cabshooyinka dadka.
Dalladu waxay Warsaxafadeedka ku muujisay sida ay uga xuntahay cidkasta oo ku kacda falal lid ki ah ammaanka bulshada, islamarkaana khalkhal gelinaya xasiloonida Puntland, waxayna ku talisay in khilaafaadkasta lagu dhameeyo wada hadal iyo deganaansho.
Warsaxafadeedkii oo Dhamaystiran Halkan ka Akhriso
Dalladda Daneeyayaasha aan Dawliga ahayn ee PUNSAA waxa ay muujinaysaa sida ay uga xuntahay cidkasta oo ku kacda falal lidka ku ah ammaanka bulshada islamarkaasna khalkhal gelinaya xasiloonida Puntland. Waxa ay Dalladdu ka soo horjeeda in la weeraro xarumaha Dawladda iyo rabshado ka dhaca guud ahaan Puntland, taas oo bedelkeeda ay ku talinayso in khilaafaadkasta lagu dhameeyo wada hadal iyo deganaansho.
Gadoodka Askarta qabsatay xaruta Barlamaanka iyo Wasaaradda Maaliyadda 26/02/2017 ee Garoowe iyo banaan baxyada ka dhacay magaalada Bosaaso ma aha wax la dhayalsankaro. Waxaa habboon in arinta laga ilaaliyo in ay faraha ka baxdo oo gaarto meel ay adagtahay wax ka qabashadeedu.
Dalladda PUNSAA waxa ay ugu baaqaysa Dawladda Puntland in ay si miyir badan oo dhaqso leh wax uga qabato cabashooyinka ay tirsanayaan dadka sida ficilka ah u muujinaya dareenkooda oo aaney dhibsan ee u dul qaadato soo bandhigidda waxa gar loogu leeyahay in ay wax ka qabato islamarkaasna si hufan u fuliso masuuliyadda ay ummadda u hayso.
Dalladda PUNSAA waxa ay u aragtaa lagama maarmaan in Askara iyo shaqaalahaba ay helaan mushaharooda islamarkaasna ay Dawladdu wax ka qabato Sicir Bararka foon dhaafay. Waxaanu u aragnaa in ay dantu ku jirto in la dhowro sharciga iyo kala damaynta islamrkaasna lagu xisaabtamo masuuliyadda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin hay’adaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu.
Dalladda PUNSAA waxa ay ka xuntahay xarigga loo geystey Nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim (Xarago) oo ka tirsan Golaha Guud ee PUNSAA. Waxaanu ku baaqaynaa in si dhaqso ah arintiisa loo xaliyo.
Gabagabadii waxaa Dalladda PUNSAA soo jeedinaysaa in ay muqadas tahay sugidda ammaanka iyo xasiloonida Puntand islamarkaasna ay xil iyo waajib tahay dhawrista xaquuqda Askarta, Shaqaalaha iyo guud ahaan Bulshada.
Nuur Shire Cismaan
Golaha Wasiirada Soomaaliya oo Ansixiyey heshiisyadii Soomaaliya iyo Turkiga[Sawirro]
Qarax ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen ku dhawaad Illaa 14 qof
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Cirro oo kalsoonida kala noqday Guddiga Doorashada Somaliland
Gen. Khaliif Ciise Mudan oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweyne ee Puntland[VIDEO]
Madaxweyne Farmaajo oo Tababar usoo xiray Ciidamado ka tirsan kuwa Asluubta
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka oo loogu baaqay iney yimaadaan Muqdisho
DHABAR JABKA DP WORLD [Maqaal- Qore : Sharmarke Abdullahi Ali
Categories Select Category News in English Opinion Somali News Sports Video World News